कांग्रेसले दिएन साथ, दाहाल र नेपालको उठीबास! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतवार, बैशाख १८, २०७९ मा प्रकाशित
सकेर छाडे । जब जगन्नाथले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन् तब मुटुमा किला ठोके जस्तो भयो । नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्ष, हाम्रो माउवादी केन्द्रको सम्पूर्ण शक्ति र सप्पै राज्य संयन्त्र परिचालन गर्दा पनि जगन्नाथले उम्मेदवारी फिर्ता लिन मानेनन् । मान्छे जिद्दी रान । साम,दाम र दण्डले पनि उनलाई लोभ्याउन र डराउन सकेन । कार्वाही गर्दै पार्टीबाट निकालेर के गर्नु ! नानी छोरीलाई चिलिम फर्काइ हाले। उता भरतपुरका जगन्नाथ, यता पोखराका विमल कार्की ! सम्झ्यो कि भावन्न भर अाम्छ । फुल्टिन पनि गुल्टिन भयो , अाँसी र हम्मर पनि चिलिम भयो । हामीलाई ठूलो धोका भो । फेरि यही बेला मतपत्र पनि चबाउन नमिल्ने बनाका रान । चबाएमा दाँत भाँचिने मतपत्र कसरी बनाएका हुनन् ! सप्पैतिरबाट हामीलाई दशाले घेरेको छ । अब यही पारा हो भने अर्को चुनाउमा हाम्रो महान पार्टीका सदावहार अध्यक्ष काम्रेडको बाक्सा खाली पार्छन् होला ! भरतपुर सम्झिएर मलाई त पसिना छुटेको छ भने नानीको बाउलाई कस्तो छटपटी भएको होला !
नमस्कार है विध्वंसे काका ! अाज यो सण्डे भाइले गर्दा अाम्नलाई अलि ढिला भयो । उभिण्डे खोलामा ठ्याक्क ठूले बाहुनसँग भेट भयो । `छोरीले हार्ने भइन्´ भनेर दुखमनाउ गर्दै थिए । अनि हौ काका ! नयाँ खबर के छ ? काठमाडौंतिर फुन गरेउ कि नाइ ।
अब मैले किन फुन गर्ने ? तिमार्को कांग्रेसले भरतपुर र पोखरामा कम्युनिष्टलाई भोट नदिने भएछी हामी पनि रुखमा भोट हाल्दैनौ । त्यतातिरका कांग्रेसले हामीलाई हेप्नु हेपे । जानिजानी माथिको अादेश नमान्ने पनि कांग्रेस हुन्छ ? यस्ताई पोरै निकाल्नु पर्दैन थ्यो ? देउवा बाहेक हाम्रो अाँसी हम्मर र फुल्टिनलाई मया गर्ने कुनै कांग्रेस छैन । भरतपुरका जगन्नाथ पौडेल र पोखराका विमल कार्कीलाई नेपाली कांग्रेसले नै उठाको प्रमाणित भयो । अस्ति बिहीवारसम्म कांग्रेस अाफैले पोखराको अाफ्नै पार्टी कार्जेलयमा तालाबन्दी गरेर दुनियाँलाई नया खालको नाटक देखायो । अनि शुक्रवार कांग्रेसका बागी तीनजना मध्य दुईजनाले नाम फिर्ता लिए र कांग्रेसका अर्का बागी स्थानीय नेता विमल कार्कीलाई दह्रोसँ फुल्टनका विरुध्द उभ्याए । पोखरामा माधव नेपाललाई यसरी समाप्त पारिदै छ भने हाम्रा बाउ छोरीलाई कांग्रेसले चितवनबाट डाँडो कटाउदै छ ।
हैट काका ! उनार्लाई पार्टीले कार्वाही गरी सक्यो । अब तिनारू कांग्रेसको साधारण सदस्य पनि छैन । प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री, अर्को मन्त्री, तिम्रो अध्यक्ष महान क्रान्तिकारी काम्रेड र हाम्रो वरिष्ट नेता राम जीलेसमेत भरतपुरका जगन्नाथलाई `नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद, भोट केमा अाँसी र हम्मरमा´ भन्नु भनेर गर्धनमा ङ्याकेका थिए । ती जगन्नाथ पनि कमका रैन रान । ज्यान गए मानेनन् । `चारतारे झण्ड मुनी बसेर रुख चिन्हमा भोट हाल्न पाम, भरतपुरमा नेपाली कांग्रेसको विउ जोगाउँ´ भन्ने तर्क गरे । अब पोखरा र भरतपुरमा कांग्रेसको भोट कम्निष्टेलाई जादैन । विद्रोही कांग्रेसले पनि जित्तैन । लगो काका लगो एमालेले नै लगो ।
कस्ले लगो भनेको भिरघरे भतिज ! काठमाडौंमा स्थापित सजिलै जित्छन् । भरतपुरमा मतपत्र चवाएर, नारायणीतिर ठेलेर र बाकस फेरेर भए पनि … !
झुम्री काकी पनि कुरो बुझ्दिनन् । मतपत्र नै चवाउन नमिल्ने छापेको छ अरे । अस्ति चवाएर टेष्ट गर्दा दुईजना काम्रेडको बत्तिसै वटा दाँत झर्…!
यो सण्डे पनि वाइयात कुरो गर्न थाले छ । मतपत्र त जसरी पनि चवाउन मिल्ने नै बनाउनु पर्छ । नत्र भरतपुरका मतदाताले मान्य वाला छैनन् । चवाउन र च्यात्न नमिल्ने पनि मतपत्र हुन्छ ?
हेर काका ! सम्पूर्ण राज्यशक्ति लागे पनि भरतपुर र पोखराका कांग्रेस मतदाताले अाँसी र हेम्मर, फुल्टिन र मसीलाई भोट हाल्दैनन् । खोजीखोजी कांग्रेसका विद्रोहीलाई भोट हाल्छन् । पोखरा र भरतपुरमा विद्रोही दोस्रो, राप्रपा तेस्रो तिमार्को माअोवादी केन्द्र चौथो लम्बरमा जाने देखिन्छ । बिचरा माधव नेपालको केजाति पार्टीको `पोखरा न हेटौडा, जिरोमा भेटौला´ हुने भयो ।
हाम्रो प्रचन्नलाई अब `रेणुको बाउ´ भन्न थाले!
ठिक भन्यो भिरघरेले । `माधवको वन बास् प्रचन्नको उठी बास्´ भनेर दुनियाँ भन्दै छ । होइन हौ अस्तिसम्म यिनार्को चुरिफुरी सानो होइन ! माधव र प्रचन्न अाअाफ्नो पार्टी पहिलो हुने घोषणा गर्दै थिए । अहिले बिचराहरू कांग्रेसीको दयाको भिख माग्दै छन् । पोखरामा कांग्रेसका विद्रोही उम्मेदवार विमलबहादुर कार्कीको जुलुसमा मिसिएर माअोवादीहरू हिड्दै छन् । वडामा कांग्रेसको भोट पाइन्छ भनेर लागेका होलान । कांग्रेसले कम्युनिष्टलाई भोट दिनु त नाप्पियो । पहिला कांग्रेसले छोरीलाई जिताइ दियो पछि अोलीसँग मिलेर बाउले कांग्रेसलाई हराई दियो । यसको बदला यसपालि कांग्रेसले चुक्ता गर्दै छ ।
बाठी नहु झुम्री ! यदि छोरीले हार्ने अवस्था अायो भने मत गणना गर्दागर्दै जे पनि हुन सक्छ । भरसक त्यो भन्दा अगाडि नै कुनै घटना गराएर चुनाउ रोक्ने योजना बनाइन्छ । बढी कुरा गरेर हामीलाई `डोमिनेट´ नगरे हुन्छ । हाम्रो महान काम्रेडहर्ले कांग्रेस र एमालेलाई नारायणीमा खँदार्न सकेनन् भने म पनि उभिण्डे खोलाको पानी खान्न । तिमार्ले गफ चुटेर केही लछारपाटो लाम्दैनौ ।
ए काका ! लोटामा खोला अटाउदैन भन्ने थाहा छैन ? एमाले र कांग्रेस भनेको खोला हो तिमार्को नेकपा समाजवादी र माअोवादी केन्द्र भनेको लोटा हो । लोटा सोटा यसपाली खोलाले बगायो ।
हेर भिरघरे ! हामीले भरतपुर हार्दा गठबन्धन सरकार छर्लम्मै हुन्छ । अनि फेरि अोली प्रधानमन्त्री बनेर चुनाउ गराउछन् । त्यसबेला कांग्रेस र माअोवादीको अवस्था के होला !
अवस्था केही हुदैन । चुनाउमा प्रतिस्पर्धा एमाले र कांग्रेसको हुन्छ । तिमारू `सिन´बाट अाउट हुन्छौ । त्यसबेला अधिकांश स्थानको चुनाउ हामी जित्छौ । कारण अोलीको रिसले माधव र प्रचन्नहर्ले पनि चार तारे झन्डा बोकेर `भोट केमा ? रुखमा´ भन्दै हिड्छन् । अर्को कुरो भरतपुर र पोखरामा तिमार्ले केही गर्न सक्तैनौ । त्यहा कांग्रेस र एमाले मिलेर तिमार्लाई एक्कै छाक बनाम्छन् ।
गठबन्धन भाँड्ने कुरा नगर भिरघरे ! यदि गठबन्धन भत्कियो भने यो देशमा एकछत्र अोलीको पार्टीले जित्छ । तेरो कांग्रेस पनि हेरेको हेरै हुन्छ ।
त्यसो भए पनि ठिकै हुन्छनी काका ! अोलीले विकासका काम त गर्छन् । हाम्राहर्ले जस्तो भुक्कै केही नगरी त बस्तैनन् । अार्थिक रुपले राष्ट्र नै कोल्याप्स् हुने अवस्था त पक्कै पनि रोकिन्छ । लौ काका म चुनाउ प्रचारतिर लागें । अब अर्को हप्ता भेटौला !
गठबन्धन न सठबन्धन अाफ्नै चिन्ह जिन्दावाद !
अोलीका रिसले भड्डु कुच्याएपछि…!